अगस्ट 01 – पवित्र परमेश्वर ! – Elim Glorious Revival Church – Kodambakkam
अगस्ट 01 – पवित्र परमेश्वर !
By elimchurchgospel | August 1, 2021 | Appam - Nepali | No Comments
“दिनरात तिनीहरू नथामिकन यसो भन्‍दै गाइरहन्‍छन्, “पवित्र, पवित्र, पवित्र परमप्रभु सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, जो हुनुहुन्‍थ्‍यो र हुनुहुन्‍छ र जो आउनुहुनेछ। ” (प्रकाश ४:८)।
हाम्रा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको बिशेषताहरु मध्ये सबै भन्दा प्रमुख बिशेषता हो पवित्रता । यहि परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ कि तपाई पनि उहाँ जस्तै पवित्रता प्राप्त गर्न तर्फ़ अगाडी बढ्नुहोस। परमेश्वरले प्रेरित यूहन्नालाई पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक गर्ने इच्छा गर्नुभयो र स्वर्गमा के भैरहेको छ भनि हेर्नलाइ उनलाई स्वर्गीय राज्यमा लिएर जानुभयो। उनले त्यहा के देखे? उनले त्यहाँ स्वर्गीय सेनाहरुले दिन रात परमेश्वरलाई ‘पवित्र, पवित्र, पवित्र’ भन्दै गाउदै आराधना गरिरहेको देखे ।
तामिल संस्करणको बाइबलमा यस पदमा भएको ‘पवित्र’ शब्दलाई ३ पटक लेखिएको पाइन्छ भने, अन्य अनुवादहरुमा, यो शब्द ९ पटक सम्म दोहोर्याइएको पाइन्छ। हाम्रा परमेश्वर त्रियक परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसकारण ‘पवित्र, पवित्र, पवित्र’ भनेर तीनपल्ट भनिएको हो। हाम्रो त्रियक परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ।
उहाँ जगतको सृष्टिभन्दा पहिले देखि नै पवित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले पनि पवित्र हुनुहुन्छ र आउने समयहरुमा पनि उहा पवित्र नै हुनुहुनेछ। उहाँ अनन्तको शुरुवात देखि नै पवित्र हुनुहुन्थ्यो । परमेश्वरको पवित्रता अनन्त छ। उहाको सुन्दरता, प्रतिरुप र बनावट सधै नै पवित्र रहिरहने छ।
त्यहि पवित्र परमेश्वरले तपाइलाइ पनि पवित्र हुनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। उहा तपाइको व्यक्तिगत जीवनको पवित्रताको बारेमा चाख राख्नुहुन्छ। उहा तपाई कस्तो देखिनुहुन्छ र कस्तो देखाउनुहुन्छ भन्दा पनि तपाइको पवित्र जीवन कस्तो छ त भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ । तपाइलाई पवित्रता तर्फ़ बोलाउनुहुने परमेश्वरले तपाइलाई कहिल्यै पनि बीच मै छोड्नुहुन्न। तपाइलाई पवित्र हुन बोलाउनुहुने परमेश्वरले तपाइले पवित्रतालाई सिद्ध नपारुन्जेल अगुवाई गरि नै रहनुहुने छ।
परमेश्वर तपाइको स्वरुपलाई परमेश्वरका पुत्रको स्वरुप जस्तै बनाउने लक्ष्य राख्नुहुन्छ। “किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरको निम्‍ति तिमीहरू एक पवित्र जाति हौ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरले पृथ्‍वीमा भएका सबै मानिसहरूमध्‍येबाट आफ्‍नो निम्‍ति एक विशेष जाति, एक अमूल्‍य सम्‍पत्ति बनाउन तिमीहरूलाई छान्‍नुभएको छ।” (ब्यबस्था ७:६)
यति पवित्र परमेश्वर तपाइको परमेश्वर हुनु र तपाइले उहालाई पवित्रताको सुन्दरताका साथ् आराधना गर्न पाउनु तपाइको निम्ति एक महान आशिष होइन र? जब तपाई पवित्र जीवन जिउने निश्चय गरेर त्यसमा मेहनत गर्नुहुन्छ भने तपाइलाई हरेक मार्गमा सहायता गर्न उहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ। बाल -बच्चाहरुको विकास देख्दा के उनीहरुका अभिभावकहरु खुशी हुदैनन् र? यस बारे केहि बेर सोच्नुस त। यदि जीवनमा पवित्रतालाई जोगाइ राखिएन भने, उक्त व्यक्तिले फोहोर र अशुद्ध कुरालाई पक्रिरख्नु भन्दा अरु कुनै विकल्प नै रहदैन । यदि कुनै व्यक्ति फोहोर र अशुद्ध कुराहरुमै जिउछ भने, उक्त व्यक्ति अनन्तको निम्ति कहाँ पुग्ला?
परमेश्वरका प्रिय छोराछोरीहरु, पवित्र जीवन जिउनको निम्ति गर्नुपर्ने हरेक बलिदानको निम्ति तयार रहनुस।
मनन गर्नका लागी: “तर तिमीहरूलाई बोलाउनुहुने जस्‍तो पवित्र हुनुहुन्‍छ, तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहनसहनमा पवित्र होओ। (१ पत्रुस १:१५)